Casa Mia Italian Kitchen and Bar | မြန်မာ စားသောက်ဆိုင် လမျးညှနျ Myanmar Restaurant Guide Drecome Eat and Health
Casa Mia Italian Kitchen and Bar | Kyauktada
အီတာလီလျံ အစားစာ / ကဖီး / ဘား
Casa Mia Italian Kitchen & Bar ကို နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး Sule Square၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင်တည်ရှိပါတယ်။ ကျယ်ဝန်းခမ်းနားသောနေရာထိုင်ခင်းများရှိသောကြောင့် မိသားစု (သို့) သူငယ်ချင်းများနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးစားသောက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အီတလီအစားအစာ မျိုးစုံကိုသုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး အီတလီဝိုင်၊ ပြင်သစ်ဝိုင်၊ ကော်ဖီနှင့် အအေးအမျိုးမျိုးတို့ကိုလည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အစားအစာများကို အီတလီစာဖိုမှူးကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပေးတာကြောင့် အီတလီအရသာစစ်စစ်ကိုခံစားရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Casa Mia တွင်သီးသန့်အခန်းများလည်းရှိပြီး Company Meeting များ၊ Birthday Party များ နှင့် Group Party ပွဲများကျင်းပရန်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အီတာလီလျံ အစားစာ | ကဖီး | ဘား
အီတလီစတိုင်ခေါက်ဆွဲ | ပီဇာ | ယမကာ | ဟင်းပွဲအသေး | သစ်သီးဖျော်ရည် | အသားညှပ် ပေါင်မုန့်
သီးသန့်အခန်း | ပြင်ပ သို့ယူဆောင်သွားနိုင်သည်။ | ကားရပ်ထားရန်နေရာ | အင်တာနက်သုံးစွဲခွင့် | လေအေးပေးစက်
11:30 AM - 10:30 PM ( ဘာမှမရှိပါ )
Sule Square #01-14,No. 221, Sule Pagoda Road, Kyauktada Tsp., Yangon.
Seasons Bistro (Sule Square Branch)